Ny androaniko | Aprily 2009
[Ankapobeny ] 11 Aprily, 2009 08:43
Paka 2009 : mirary soa ny namana rehetra.
[Hira ] 07 Aprily, 2009 13:02
Iza no nahatsiaro ity ?
Eeeh, zany ny hira tamin'ny andronay - - efa nohavaozina izy eto fa tena mbola reveko...(ndao hitsiky aloha fa be loatra ny mampitsetra)
[Fanajana ] 06 Aprily, 2009 18:07
Miondrika noho ny horohoron-tany namely anay izahay eto Italia.
Miondrika indray izahay fa maro no mamoy ny ainy tamin'ity horohorontany mafy nanampoka anay tanatin'ny torimasonay tamin'ny telo sy sasany maraina ity. 5,8 amin'ny mari-pandrefesana Richter ny hamafiny.
L'Aquila, tanàna eo @ 100 km avy eto Roma no foibeny fa izahay teto Roma dia samy taitra sy nahare tsara ny fihovitry ny tany avokoa. Na izany aza dia misy ihany ny tranoavo simba ka tsy azo hialofana eto Roma. Ny làla-migodàna mampitohy an'i Roma sy L'Aquila moa teo nohidiana fa efa misokatra ho an'ny fiara madinika izy izao fa tsy azon'ny fiara vaventy ampiasaina fa manjary manelingelina ny fifamoivoizan'ny famonjena satria maro ireo maratra no tsy maintsy alefa amin'ireo hopitaly hafa ivelan'ny faritra niharan'ny voina.
Efa 150 eo ho eo izao no namoy ny ainy, 1500 ny maratra ary tsy vitsy ny maratra mafy, 50.000 no tsy manam-kialofana, trano efa ho 15.000 no tsy azo honenana intsony fa efa rava tanteraka na efa marefo dia marefo tokoa.
Mbola mitohy ny fihorohoron'ny tany. Tamin'ny 6 sy sasany hariva teo no mbola nisy iray naherihery teo amin'ny 4,1 amin'ny mari-pandrefesana Richter.
Ny loza dia efa mananontanona ihany koa ny orana sy havandra hijojo ao L'Aquila anio hariva. Hampihena ny fandroson'ny asa fitadiavana ireo olona rakotra anaty rindrina mianjera izany. Voatery karohana amin'ny tànana mantsy fa tsy afaka mampiasa fitaovana misy motera satria aina no tadiavina ao.
Dia tsy any amintsika ihany moa fa angamba noho izahay mbola aty Afrika (???) fa dia efa manao ny asany ihany koa izao ny jiolahy ("foza orana" koa ve izy ireo izany ?) manararaotra mandroaka ny entana miparitaka sy tsy voaraokan'ny tompony sahirana tamin'ny fanavotana aina.
Ireo Malagasy namana sy fianakaviana monina ao L'Aquila sy ny manodidina dia toa efa nahazoana vaovao daholo ihany fa tsisy azon'ny voina, misaotra ny Avo.
Misaotra ireo namana rehetra nisahirana nanoratra nanontany vaovao momba anay.